"Ku -sheekaysiga Jiilasha ku Saabsan Waxbarashada (iTAGe)" ee Kolombiya - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
“Ku -sheekaysiga Jiilasha ku Saabsan Waxbarashada (iTAGe)” ee Kolombiya
September 5, 2021 Warbixinnada Waxqabadka 0
QAABINTA DHAQANKA NABADDA IYO DIMUQRAADIYADDA EE WAXBARASHADA
Fundación Escuelas de Paz wuxuu abaabulayaa madaxbanaan Ka Hadlida Jiilka Qarniga oo dhan Waxbarashada (iTAGe) xafladda wada hadalka dhallinyarada ee Kolombiya oo ku saabsan doorka waxbarashada ee hirgelinta Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee 2250 ee ku aaddan Dhallinyarada, Nabadda iyo Amniga.
iTAGe waxay sahamin doontaa doorka waxbarashada ee kor u qaadista ka -qaybgalka dhallinyarada iyo dhaqanka nabadda ee Kolombiya, iyo sidoo kale tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah fulinta Qaraarradaas dalka.
UNSCR 2250 iyo qaraarkeeda dabagalka UNSCR 2419 aqoonsadaan doorka muhiimka ah ee wanaagsan ee dhallinyaradu ku leeyihiin dhisidda nabadda. Go'aannadu waxay xoogga saarayaan baahida loo qabo in la maalgeliyo waxbarashada si kor loogu qaado dhaqanka nabadda, baabi'inta sinnaan la'aanta iyo takoorka, dhiirrigelinta dulqaadka iyo awood -siinta dhallinyarada.
Sida ku salaysan Habka UNESCO MGIEP TAGe, iTAGe waa wada-hadal dhallinyaro ku salaysan oo ku saabsan waxbarashada oo siisa madal aan kala sarreyn oo ay dhallinyaradu is-dhexgalaan, ka doodaan kana doodaan arrimaha muhiimka ah ee quseeya mustaqbalka, oo leh siyaasad-dejiyeyaasha.
UNESCO MGIEP waxay diiradda saareysaa sidii loo gaari lahaa Yoolalka Horumarinta Joogtada ah ee Qaramada Midoobay ee 4.7 xagga waxbarashada si loo dhiso bulshooyin nabdoon oo waara oo adduunka oo dhan ah iyadoo la hormarinayo barnaamijyo dhiirrigelinaya barashada bulshada iyo shucuurta, hal -abuurka barbaarinta dhijitaalka ah iyo xoojinta dhallinyarada.
Soo dejiso dulmarka pdf ee mashruuca iTAGe ee Kolombiya: English / Spain
# dhalinyarada dhisa nabada
nabad & amni
Ganacsiga Nabadda: La Shaqeynta Ardayda Dugsiga Sandy Spring Friends
Waxaa laga yaabaa 27, 2017 Warbixinnada Waxqabadka 1
Shirka Nabadda Dhallinyarada ayaa lagu qabtay Iskuulka Saaxiibada Sandy Spring ee Sandy Spring, MD. Shirka ayaa waxaa isugu yimid ardayda wax ka barata iskuulka iyo iskuulada deriska ah si diirada loo saaro “Kala-goynta‘ qodobada. ’” “Hal-abuurka Nabadda” ayaa ka mid ahaa aqoon-isweydaarsiyada la bixiyay. [sii wad akhriska…]
Iyagoo codsanaya sida deg degga ah ee ay Dowladda Colombia uga go'an tahay hirgelinta buuxda ee Heshiiska Nabadda ee 2016 iyo waxbarashada nabadda
September 16, 2019 Digniinta Waxqabadka, Warar & Muuqaal 1
Waxaan ku martiqaadeynaa taageeradaada inaad kaqeybgaliso saraakiisha aad dooratay codsashada go'aanka degdega ah ee Dowlada Kolombiya ee ku aaddan hirgelinta buuxda ee Heshiiska Nabadda ee 2016, ilaalinta hoggaamiyeyaasha bulshada, iyo fulinta istiraatiijiyadda waxbarashada nabadda oo ah habka ugu wanaagsan ee lagu sameeyo qaab-dhismeed iyo dhaqan isbedelada bulshada Kolombiya. [sii wad akhriska…]
Xarunta Nabadda ee Caalamiga ah ee Machadka Nabadda ee Mareykanka: Ka qeyb qaadashada Jiilka xiga ee Nabadda
Ann-Louise Colgan Agaasimaha, Xarunta Nabadda Caalamka - Machadka Nabadda ee Mareykanka (Maqaalka muuqaalka leh: Issue # 98 Sebtember-Oktoobar 2012) Markii Machadka Nabadda ee Mareykanka uu abuuray Koongaraska 1984, waxbarashadu waxay ahayd [sii wad akhriska…] [sii wad akhriska…]